Taunggyi - The Cherry Land: မုန်ညင်းပေါင်း
ရေးသားသူ Unknown အချိန် 8:20:00 PM
Monday, December 31, 2007 8:35:00 PM
ညီမသိချင်တဲ့ မုန်ညင်းပေါင်းနည်းကို ပြောပြချင်တယ်။
ဒီတစ်ခါ အမေ့ဆီဖုန်းဆက်ရင် မေးပေးပါ့မယ်။
အစ်ကိုက ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက မဟုတ်တဲ့ ရှမ်းတစ်ယောက်ပါ။ အစ်ကိုတို့ဒေသကလည်းရှမ်းတွေရဲ့နေထိုင်ရာနေရာ တစ်ခုပါပဲ။
ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်) လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ ဒေသ တစ်ခုပေါ့။
စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ ရှမ်းနီလူမျိုးရဲ့ အဓိက ရိုးရာအစား အစာမှာ မုန်ညင်းပေါင်း ပါတယ်လေ။
စကားတွေ.. စာတွေပျောက်ကွယ် ခဲ့..ပျောက်ကွယ်ဆဲ ..ဖြစ်ပေမယ့်။
မပျောက်ပဲ ကျန်နေတာက မုန်ညင်းစားတဲ့အကျင့်ပါပဲ။
မုန်ညင်းချဉ်၊ မုန်ညင်းကြိုင်း၊ မုန်ညင်းစော၊ မုန်ညင်းပေါင်း စတဲ့ စတဲ့….
အစားအစာတွေပေါ့။ ညီမရဲ့စာကိုဖတ်ရတော့ အိမ်ကိုလွမ်းမိတယ် …
ကောလင်း၊ ၀န်းသို၊ ပင်လည်ဘူး၊ အင်းတော်၊ ဗန်းမောက်၊ ကသာ၊ မိုးညင်း၊ မိုးကောင်း၊ ဟိုပင်၊ ဗန်မော်၊ မဲဇာ၊ မန်လည် စတဲ့ … စတဲ့ ….
ရှမ်းတို့ဒေသမှာ … မုန်ညင်းပေါင်းတွေ … ခေါပုပ်ထောင်းတွေ …
ပေါင်းတင်းတွေ …သိပ်ပေါတဲ့….ဒီအချိန်ဆို …. ကိုယ့်ရေမြေကို လွမ်းတယ် ညီမရေ …
Monday, December 31, 2007 9:30:00 PM
ကိုစိုင်းရေ.. အမေ့ကို ချက်နည်းမေးပေးမယ်ဆို တနစ်ကြာပေ့ါ ရေးပေးစမ်းပါအုန်း ခေါပုပ်ထောင်း မုန်ညင်းပေါင်းတို့ခုလိုတန်းလန်းကြီး လုပ်မထားနဲ့ငရဲကြီးတတ်တယ်။ ဒီမှာ စာဖတ်ပြီး ဗိုက်ဆာနေတယ်
Friday, January 11, 2008 6:06:00 AM
သိချင်တဲ့ မုန်ညင်းပေါင်းနည်းကို ညီမလေး နန်းဆိုင်လောင် ပြောပြလို့ ခုတင်ပေးလိုက်ပြီ .. ဖတ်ကြည့်နော် ..
မုန်ညင်းစိမ်း နဲ့ ပေါင်းတယ်လေ
အစ်ကိုတို့ဘက်မှာ မုန်ညင်ခါး က သတ်သတ်ရှိတယ်
NannOo: ကောက်ညင်းမုန့် 1 ဆ နဲ့ ဆန်မုန့်တဆရော ပြီး
ပြီးတော့ ပဲပုပ်ထောင်းပါရော နယ်
saing: အင်း အစ်ကိုတို့ဘက်မှာ မှုန့်နစ်လို့ခေါ်တယ်
NannOo: ဆားနဲ့ အချို မှုန့် ကို လို သလောက်ထည့်
NannOo: ပေါင်းရင် အောက်မှာ ငှက်ပျော ဖက် ခံပေါင်း
saing: အစ်ကိုတို့ဘက်မှာ ဟင်းချိုမှုန့်လို့ပြောကြတယ်
NannOo: လေပေါက် ကနေ
NannOo: အနံ့ ထွက်ကုန်ရင် မမွှေးတော့ဘူး
စတီးအ်ိုး ဇကာပေါက်နဲ့လည်း ရှိတယ်လေ
saing: ငှက်ပျောဖက်က မုန်ညင်းရဲ့အောက်ဆုံးမှာ ခံတာလား
NannOo: မုန်ညင်းတွေ ညိူပြီး
saing: မမြင်ဘူးတဲ့လူဆို သိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ
NannOo: ဆန်မှုန့် ခဲသွားရင်
NannOo: time will take upon mustad amount
saing: ဟင်းပေါင်းအကြောင်းပြောရင် အိမ်ပြန်ပြီး အမေ့လက်ရာစားချင်တယ်
ခရမ်းချဉ်သီးက ထည့်တဲ့ သူထည့်တယ်
saing: အော် ..
အင်း အမေပေါင်းတာ...ပါတယ်ထင်မိလို့ ... မသေချာဘူး ... စားလို့ကောင်းတာပဲသိတယ်
NannOo: မနေ့ ကရေးပြီးတင်မရလို့
u ကိူ send လိုက်တာ
NannOo: ဘယ်သူ တင်2 သိချင်ဲတဲ့သူ သိသွားရင်ပြီးရော
NannOo: နောက်သိချင်တာ ရှိမေးပါ
saing: ဂျေဂျေ ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က ရေးပေးဖို့ပြောတယ် ... ပီနန်းပြောပြတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့
saing: အင်း .. ခေါပုပ်ထောင်း .. ပေါင်းတင်း .. အဲဒီ အကြောင်းတွေလည်းရေးရဦးမယ်..
ပြီးတော့ မြစ်ချဉ် ..
saing: ပီနန်း အကုန်လုံးသိလား
ကဲဗျာ ... မုန်ညင်းပါင်းကောင်းကောင်းစားနိုင်ကြပါစေ
[url=http://address] saing.top-me.com [/url]
[url=http://address] saingkhantun.blogspot.com [/url]
အင်း ကိုစိုင်းဆီပုံးထဲ ဗြဲစာ အများကြီးရေးလိုက်တာနဲ့ဟဲစာ တင်ပေးလိုက်ပြီး ကျေးဇူးပါ ကိုစိုင်းနဲ့ မနန်းရေ. မုန်ညင်းရွက်နဲ့မုန့် နစ်ကို ဘယ်လိုထားသလဲ မုန်ညင်းကို စိတ်ပြီး ဆန်နစ်နဲ့ ရောနယ်သလား။ ဟင်းထုပ်ပုံဆိုရင် တွေးကြည့်ရတာ မုန်ညင်းရွက်စိတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးစိတ်ရောနယ် ပြီး ဖက်နဲ့ အလုံးလေးထုတ် ပေါင်းပုံရတယ်။ ဓါတ်ပုံပြရင် ကောင်းမယ်။ မနန်းမှာ ဘလော့မရှိဘူးလား။ သူ က အင်ထရိုလုပ်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေ ရေးပေးပါလား။ ကျနော်တို့ ဘက်မှာ ပေါင်မုန့် ခွေးပူ ဘာဂါ တီကောင်(စပါတကီ)ကလွဲလို့စားချင်တဲ့ အာရှအစာ (ဈေးကြီးလို့ ဝယ်မစားနိုင်လို့ ) ချက်နိုင် ရင်ချက် မချက်နိုင်ရင်ငတ်ဘဲ. အခု ဟဲချင်ပေမဲ့ မဟဲနိုင်သေးပါဘူး
Tuesday, January 15, 2008 4:20:00 PM
ကဲ ဆရာသမားရေ အင်ထရိုလေးစခဲ့ရင် ဆက်ရေးပေး ပါအုန်း တန်းလန်းကြီးမထား ကောင်းဘူး စိုးဝင်းနဲ့အတူနေနေရအုန်းမယ် (ငရဲကြီးတတ်တယ်)
ဖတ်တာနဲ့သားရေတွေကျလာပြီ
ဒို့ ရှမ်းပြည်မှာအစာတွေပေါတာသူတို့ မသိကြရှာဘူး။
အယ် ဟုတ်လား ဒါဆို ရှိသမျှ ချက်ပြပါအုန်း သက်သေ သာဓကနဲ့မှန်ရမဲ့ မေဗမာလေးရေ.. ကြွားပြီးရင် ချက်နည်းရေးပြမှဖြစ်မယ် ဖတ်ရတဲ့သူတွေ တန်းလန်း(စိတ်)ဖြစ်အောင် မထားနဲ့စိုးဝင်းနဲ့ သွားတွေ့ ရလိမ့်မယ် (ငရဲကြီးတတ်တယ်)
မုန်ညင်းငေါက် ဆိုတာ ဘာတုန်း
မုန့် ညင်းငေါက်ဆိုတာ မုန့် ညင်းစိမ်းကိုပြောတာပါ။ စိမ်စိမ်း
လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်နဲ့အငေါက် အညွန့် အဖူး အပွင့်လေးတွေ
မုန့် ညင်းဖြူ မဟုတ်ဘူး
ဆန်ကိုလှော်ထောင်း ငရုပ်သီး ကြက်သွန်ထောင်း
မြေပဲထောင်း အားလုံး မုန့် ညင်းငေါက် တွေမှာသိပ်လို့ 
စားလို့ ဆိမ့်တယ် သက်တယ်
ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဘာသာပြန်ရေးနေတဲ့ 
အန်တီ အောက်ဆီဒင့်တို့ ဘာတို့ ဆိုတာ
နောက်ဆုံးကြတော့ ရာသီစာသီးနှံတွေမှာ အကုန်ပါတာ
ကဲ ရာသီစာ ဒေသစာ စား ကြပါ
ပဲပုပ် ထောင်းပါထဲ့ရပါတယ် မေ့သွားလို့ ပါ
ဂျေဂျေခမျာ ... အငေါက်ကိုပင် မသိရှာချေ ... သနားဖွယ်ကောင်းလေစွ ... ဓာတ်ပုံ ( not EE ) နှင့်တကွ ပြခြိမ့်ဦးမည် (တွတ်ပီလေသံ) .... အင်း .... အငေါက် = အဖူး အညွှန့် နှင့်တကွ အလွန်မရင့်သေးသော အရွက် ၅ ရွက်ခန့်ပါသော အပင်၏ အစိတ်အပိုင်း (စိုင်းအဘိဓာန်မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်) ... ဟီး ....
Email မှတဆင့် Photo ပို့လိုက်ပါမည်
Wednesday, January 16, 2008 10:57:00 PM
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#cwxec]buy cialis online[/url] - cialis online , http://buycialispremiumpharmacy.com/#odocw buy cialis online
Friday, March 01, 2013 7:29:00 PM
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#eylic]buy cheap viagra[/url] - buy viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#vonha buy cheap viagra
Friday, March 01, 2013 8:11:00 PM
[url=http://buyonlineaccutaneone.com/#wokae]buy accutane online[/url] - buy accutane online , http://buyonlineaccutaneone.com/#fhjfl accutane 20 mg
Wednesday, March 27, 2013 7:30:00 PM
[url=http://buyamoxilonline24h.com/#lcryh]amoxil without prescription[/url] - amoxil online without prescription , http://buyamoxilonline24h.com/#fresi generic amoxicillin
Thursday, April 04, 2013 11:30:00 AM
[url=http://buynolvadexonlineone.com/#tvdut]nolvadex online without prescription[/url] - nolvadex 10 mg , http://buynolvadexonlineone.com/#ldaeh nolvadex online
where can you buy green coffee beans[/url] has been featured in distinct video receiver talk shows and advertised all done with the snare, nonetheless people are still disbelieving upon the results. This is why I indisputable to write this judge article and will thoroughly clarify the benefits of lawn beans.
Around twenty five percent of world inhabitants is rotund! This isatremendous difficult and we all be sure what the reason behind this is: refuse edibles and insufficiency of exercise. People love fatty foods, they are same pleasing and close to cause; yet it also providesaobnoxious side essentially heaviness gain.
Since the revolution of computer far-out people are getting more and more lazy, be without of exercise is another well middleman after obesity. People do not after to change-over their lifestyle. Changing diet seems quite naughty and bring to bear on surmount that makes it harder.
Scientists are constantly finding up to date innovative ways to win out over our challenges and after years of probing they discovered the benefits of common coffee beans extract.
We all indulge coffee on normal bases so what is strange almost green beans? Automatic coffee are roasted beans and when you roastabean it loses the most important component - Chlorogenic acid. Pure green coffee admit onatrip level of Chlorogenic acid.
What is so special with reference to Chlorogenic acid? Once this element is heart the corps it attacks the body unctuous cells hardly immediately, it shrinks them into tiny pieces and flushes out. Past regulating your trundle movements you are constantly reducing abundance from your system.
Unsophisticated beans also affects your metabolism velocity, it increases your body calories fervid scale which means further weight loss. Additional it does not motive any sort of nullifying side effects. Country-like beans also regulates your blood sugar levels which is utter sturdy after diabetic patients.
A scanty mug up was made in San Diego with scientist and volunteers (people with consequence issues) and after 22 weeks of lawn coffee bean sustenance they on usually adrift 17.5 pounds! All of these without regular exercise and without piercing diets.
So my friends if green coffee beans cutting unqualifiedly works! Just take in reliable you are drinking at least2litres of wateraheyday to put an end to hydrated because dehydration can rebound in first of all when you are constantly reducing assemblage weight.
green coffee beans sale[/url] asamatter of fact isabreakthrough in weight impoverishment work! Any longer no whole can pressure an free quest of mass loss.
Friday, April 19, 2013 5:33:00 PM
[url=http://hairtyson.com]phen375 side effects[/url]Extraordinary site. Be undergoing you always been told that your position helpen an orphan. Yes it categorically helped. Thanks Alot Buddy.
Saturday, May 25, 2013 10:36:00 AM
Friday, October 09, 2015 1:42:00 PM
Friday, May 27, 2016 5:05:00 PM
Saturday, June 25, 2016 6:02:00 AM
Sunday, September 18, 2016 11:10:00 PM
zzzzz2018.9.3ray ban sunglasses
Wednesday, September 25, 2019 10:50:00 AM